Voasarika ho eo amin’ny laharana faharoa ny kandida tsy miankina Me Tody Arnaud. Mbola laharana faharoa koa ny mpanolontsaina miaradia aminy.
Ho laharana fahatelo amin’ny bileta tokana taorian’ny fisarihana i Roland Ratsiraka, kandidan’ny filohan’ny antoko MTS (Malagasy Tonga Saina). Mbola io laharana ihany koa no voasarika ho an'ny mpanolontsaina miaraka aminy.
Ho laharana fahaefatra i Yvan Fabius, kandida tsy miankina amin’ny fifidianana Ben'ny tanàna. Tsy manana lisitra mpanolontsaina kosa ny tenany.
Delegasiona manokana tarihin-dRazafimanana Jean Christain, no mitantana ny tanànan'i Toamasina nanomboka tamin'ny jona 2019 rehefa naato tamin'ny asany ny Ben'ny tanàna voafidy teo aloha, Elisé Ratsiraka, ity farany rahateo nirotsaka hofidiana solombavam-bahoaka tao amin'ny Distrika Mahanoro tamin'ny aprily 2019 teo.